Belarosia : Ny Atsinanana sy Ny Andrefana, Dia Tsy Misy Na Inona Na Inona Eo Anelanelany ? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Jolay 2011 15:57 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, русский, srpski, English
“Atsinanana dia Atsinanana ary Andrefana dia Andrefana, ary tsy hifanena na oviana na oviana ireo.” Io andalan-tononkalon'i Kipling io, mazàna diso fampiasa, dia toa mampiseho ny zava-misy marina ho an'ny sarambabem-bahoaka Belarosiana, satria ireo krizy sy hetsi-panoherana farany dia lasa fanairana an-kerisetra an'ilay “hatsaràna resin-tory” Sovietika avy tao amin'ny torimasony. Mifoha anaty tontolo tsy mahalala fomba sy mahery setra, maro izao ireo manomboka manontany hoe: “”Iza no mba miraharaha an'i Belarosia?”
Noho izany, nitaraina [ru] i by_volunteer, mpampiasa ny LiveJournal fa ny toekaren'ny firenena dia namidy tamin'ny Rosia, raha be olana be tsy afaka ny hihevitra ny momba izany ry zareo Eropeana :
Fa aiza i Eraopa ary aiza ny fitsarana? Miely be ny fahatsiarovan-tena ho tsy raharahiana ary, amin'ny endriny rehetra, fitondrana tsy rariny, miampy fahadisoam-panantenana amin'ny ankapobeny ny tsy fisian'ny fanantenana amin'ny fiainana andavanandro sy ny fanantenana amin'ny ho avy. Mitantara ny tsy nahazoan-janany lahy “visa Schengen” ho any Eraopa, mitaraina [ru] mafy ity reny iray fahatsapany ny fomba ieritreretan'ny hafa ny avy ao Belarosia :
Tsy misy fahamarinana ao Belarosia. Nandritra ny taompolo maro, voky lainga isika, nihaino fampanantenana poak'aty sady nijery ireo tanàna Potempkine. Leo an'izany izahay. Miray hevitra daholo ireo firenena mandroso ary miara miteny hoe io karazana fitondrana io dia fanadalàna vahoaka. Saingy ahoana ny fiheverin'nyAmbasadin'ireo tanàna mandroso ireo ihany ny amin'ny fanadalana toa izany, izay iaretan'ny mponina mangina, raha – tao aorian'ny fanambaràna ny fanamorana ny fahazoana “visa” ho an'ny Belarosiana – lavina ny fahazoana “visa” na dia ho an'ireo izay hita fa mahafeno ny fepetra hahazo izany aza. [—] Ny zanako lahy nahavita ny taona fahatelo teny amin'ny anjerimanontolo, ary naniry ny ho any Frantsa noho ny fanasàna manokana. Nolavina izy [ny fangatahany “visa”]. Kanea tsy nanao zava-dratsy mihitsy izy, ny antony tokana fantatro ho nandàvana azy dia ny fihazonana azy [ mifandray aminà hetsi-panoherana talohan'ny fifidianana] ny 19 Desambra nandritra ny 15 andro.
Mikasika ilay fanontaniana “Tolstoian” momba ny devoly ao anatintsika ao sy ny tokony hanalàna azy, dolka777, mpampiasa LJ dia nanontany [ru] hoe ahoana no namelàn'ny olonan y fitondran'i Lukashenko hiroborobo :